File MSWMM A ma aha file video ah laakiin file mashruuca abuuray by Windows Movie Kan sameeyey a. Waa inaydaan ka ciyaari karaa barnaamijyada video sida ciyaaryahan Wondows Meida. Sidaas, mararka qaar waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si loogu badalo files MSWMM in video files. Dhab ahaantii, Windows Movie Kan sameeyey kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo files MSWMM in files wmv. Iyo Furfuris waa mid aad u fudud. Haddii aadan aqoon sida loo badalo MSWMM in wmv in Windows Movie Kan sameeyey, guide hoose kugu habboon.
Halkan waxaan ku tusi doonaa sida loo badalo files MSWMM in wmv in Windows Movie Kan sameeyey, oo aanay MSWMM in fomats kale la app sida wmv, AVI, MKV, MP4, MOV iyo in ka badan.
Qaybta 1aad: Sida loo rogo ama faylasha MSWMM in wmv in Windows Movie Kan sameeyey,
Qeybta 2: Sida loo Beddelaan MSWMM in qaabab kale
Waxaa jira laba nooc oo Windows Movie G Windows on suuqa. Ayaan kala horreeyaan idin tusin tallaabooyinka faahfaahsan.
I. Wixii Windows 7
Si loogu badalo aad files mashruuca MSWMM in files wmv, waxaad samayn kartaa:
Talaabada 1: Riix File menu, iyo dooranayaan Project Open dajiyaan aad files mashruuca MSWMM deegaanka. Tallaabada 2: . jiid file ah mashruuca MSWMM in Jadwalka hoose Talaabada 3: Tag "Finish Movie" dhanka bidix, iyo dooro " Save si aan computer ". Next, kii saaxir ah oo aad u horseedi doonaa si loo badbaadiyo file sida file wmv ah.
II. Wixii Wondows Visa
Talaabada 1: . Ka dib markii aad furto Windows Movie Kan sameeyey, waxaad u baahan tahay riix "File" menu dooro "Open Project" fursad u dajiyaan faylka mashruuca MSWMM aad rabto in aad Talaabada 2: Tag ah "File" menu dib, iyo dooran ee "naadiya Movie" doorasho. Markaas, "ayuu dhex naadiya Movie" saaxir arbushin doonaa. Tallaabada 3: Guji "Next", nooca magaca cusub, doortaan jidkaa file ah, iyo Riix "Next" mar kale si loo badbaadiyo file wmv ah.
Hadda, kaliya ay tagaan folder wax soo saarka si ay u hesho file wmv badbaadiyey. Waa intaas.
Qeybta 2: Sida loo rogo ama faylasha MSWMM in qaabab kale
Waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ka ciyaari files mashruuca MSWMM meelo badan. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay in la badalo MSWMM in qaabab kale video halkii wmv. Si kastaba ha ahaatee, Windows Movie Kan sameeyey ogolaan karaa oo kaliya si aad u badbaadin files qaab wmv. , Sidaas si loogu badalo files MSWMM in dheeraad ah qaabab video sida AVI, MP4, MOV, FLV, VOB, DVD, MPEG, Mpg, iwm, ay tahay in aad isticmaasho Converter MSWMM awood badan, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ).
1. files Save MSWMM sida video files
2. Import video files si Converter MSWMM this
Open Wondershare Video Converter, ee dhinaca kore ee bidix ee taas, kaliya aad si fudud u riix badhanka in aad ku darto files wmv aad badbaadisay in tallaabada 1. Ka dib markii in, waxaad arki kartaa dhammaan faylasha ku qoran Murayaad diinta this app ee.
3. Dooro qaab wax soo saarka ah
4. U beddelaan files MSWMM
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan MSWMM Faylal ay si wmv / AVI / MKV / MP4 / MOV, ECT